Orinasa maro no manao dokambarotra ara-bakiteny ny lalan-kivoahany amin'ny mari-pamantarana ambany kalitao. Ireo orinasa ireo dia toa tsy mahatsapa ny fiatraikany ratsy aterak'ity karazana famantarana ity. Fikarohana vao haingana nataon'ny Dr. James J. Kellaris avy amin'ny Lindner College of Busin ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-09
Ny famantarana any ivelany dia tsy amin'ny fironana fotsiny fa mpanelanelana amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao. Raha tompona na fivarotana kely aza ianao, dia anjaranao izany ary tena zava-dehibe aminao ny misarika ny sain'ny mpanjifanao mety. Raha miaina amin'ny vanim-potoana maoderina, andro han ...
Ny fikarohana dia manondro fa ny signage LED any ivelany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa na ny mety ho mpanjifa hifandray amin'ny orinasanao. Manakaiky ny 73% amin'ireo mpanjifa no nilaza fa niditra amina magazay na orinasa mbola tsy notsidihin'izy ireo taloha, mifototra amin'ny marika fotsiny. Ny famantarana anao eny ivelany dia ny alalanao ...